विश्वकप उपविजेता क्रोएशिया अजरबैजानसँग बराबरीमा रोकियो - २४ भाद्र २०७६, NepalTimes
विश्वकप उपविजेता क्रोएशिया अजरबैजानसँग बराबरीमा रोकियो
२४ भाद्र २०७६ नेपाल टाईम्स
२४ भदौ, काठमाडौं । विश्वकप उपविजेता क्रोएसियाले युरोकप २०२० को छनोट प्रतियोगितामा अजरबैजानसँग एक–एक गोलको बराबरी खेल्दै अंक बाँडेको छ ।
घरेलु मैदानमा विशेष गरी दोस्रो हाफमा निकै नै प्रभावशाली देखिएको अजरवैजानले युरो छनोटमा पहिलो अंक हासिल गरेको हो । समूह इ मा रहेको अजरबैजानले अहिलेसम्म चारै खेलमा पराजय ब्यहोरेको थियो । उसले पाँचौं खेलमा एक अंक जोड्न सफल भयो । यद्यपी उ समूहको अन्तिममै यथावत छ ।
पाँच खेलबाट १० अंक र्पुयाएको क्रोएसिया पनि शीर्ष स्थानमा छ । एक खेल कम खेलेको हंगेरीको ९ अंक छ । बाकुस्थित बाकसेल एरिनामा पहिलो हाफमा क्रोएसियाले अग्रता लिएको थियो । ११ औं मिनेटमा कप्तान लुका मोड्रिचले पेनाल्टीमा गोल गरेका थिए ।
दोस्रो हाफमा बल पोजिसन नियन्त्रणमा राखेको घरेलु टोलीका लागि ताम्किन खालिलजादेले बराबरी गोल फर्काए । उनले रामिल सेदायवको पास सदुपयोग गरी पेनाल्टी एरियाबाट उत्कृष्ट गोल गरेका हुन् । दोस्रो हाफमा अजरवैजानले गोलका अन्य केहि अवसर पनि खेर फालेको थियो ।
रसुवाको टिमुरेका १६ प्रहरीलाई निलम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन
वामदेवलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा सिफारिस नगर्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनी
नेकपा आन्तरिक खिचातानीमै ब्यस्त रहँदा उपसभामुख अन्यौलमा
सीमा स्तम्भको सुरक्षाको जिम्मा सेनालाई दिने तयारी
सार्वजनिक बाटो ओगटेर बनाइएका घर–टहरामा विराटनगर महानगरले चलायो डोजर
रेकर्ड तोड कारोवार गर्दे शेयर बजार, ४ अर्ब बढीको कारोबार
प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न, जन्मदिन मनाउन हेलिकोप्टर चार्टर गर्दा सिटामोल नपाएर ज्यान गुमाएकाको माया लागेन ?
बाबुरामको प्रश्न, हामी कसरी सुटेड बुटेड भयौं ? छानविन गरौं
राज्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकारद्वारा बन्धक बनाएर किशोरीमाथि बलात्कार